ZOARA FANANTENANA |
Ny Soratra Masina ihany
Nakotrokotroka ny fankalazana ny santa-bokatry ny sampan Sekoy Alahady teto amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo ny alahady 19 may lasa teo. Nifanindry indrindra ihany koa tamin’ny fankalazana ny pentekôsta izany.. Ny tenin’ny Soratra Masina notsongaina tao amin’ny Filazantsara nosoran’I Jaona 21 : 15-16-17 manao hoe :” Fahao ary ny ondriko, …fahano ary ny ondrikeliko” no nanompanana ny Fankalazana. Ny santa-bokatra dia fotoana ihany koa hitaizana ny Sekoly Alahady amin’ny fanompoana amin’ny alalan’ny fanolorana ny vokatra. Samy nanao izay ho afany tamin’ny fanoloran-tenany amin’ny alalan’ny vokatra ny ankizy tato amin’ny sampana. Nisy ny nitondra zavatra, izay navadika ho vola ary teo ihany koa no nitondra vola. Tamin’ny fony tokoa no nanaovan’ireo izany fanompoana izany. Nanohana ny sampana amin’ny fitaizana ireo ondrin’I Jesoa ny Fiangonana tamin’ny vokatra nataony.
Misy 800 eo ho eo ny Mpianatra Sekoly alahady eto amin’ny Fiangonana Zoara Fanantenana Ambohipo. Mila fanohanana izy ireo, araka ny baikon’ny Tompo hoe : “Fahano ary ny ondriko”
Ny Sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe Magdalena afaka tamin’ny henatra dia voadika amin’ny teny malagasy amin’izao fotoana izao. Nahazo tombony manokana isika malagasy satria dikan-teny faha 100 maneran-tany izao vita izao mba hahafahan’ny rehetra mahazo tsara ny tantaran’i Magdalena.
Ny Campus pour Christ Madagasikara no tompon’andraikitra eto an-toerana tamin’ny famokarana izany sarimihetsika izany. Ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny fiangonana aminy dia hiarahana indray ny manapariaka sy mandefa azy io amin’ny toerana maro eto Antananarivo Renivohitra ato anatin’ny vola vitsivitsy.
Andraikitry ny Fiangonana Zoara Fanantenana Ambohipo kosa miaraka amin’ireo fiangonana sy fokontany maro manerana an’Antananrivo ny manohy azy araka ireo fandaharam-potoana homena tsy tapaka eto.
Manomboka ny Asabotsy 20 arpily io ihany, ao anatin’ny fanombohana ny Rodorodom-pitoriana 2013 dia hanao fitoriana arahina fanentanana ny isan-tokantrano eny amin’ny fokontany Andohatapenaka ireo kristiana avy amin’ny FJKM Andohatapenaka sy FJKM Ambohipo miaraka. Ny maraina manomboka amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 12 ora atoandro no hanaovana izany. Amin’ny 3 ora tolakandro indray kosa no handefasana ny sarimihetsika ao amin’ny FJKM Andohatapenaka.
Ny Alahady 21 aprily amin’ny 5 ora hariva kosa dia halefa eto amin’ny Fiangonana Zoara Fanantenana io sarimihetsika io.
Mahay ny zava-drehetra tokoa ny mino . Porofon’izany ny zavabitan’i Mr Noely, zanaky ny fiangonana Fjkm Ambohipo tao amin’ny sampana STK , sokajy Sofafa.Tsy teknisiana na injeniera (ingénieur agronome) na koa mpikaroka( chercheur) momba ny fambolena sy fiompiana izy fa ny taranja Siansa no nianarany teny amin’ny anjerimanontolo saingy tsy sakana velively izany rehefa niainany ny tenin’Andriamanitra.Ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Genesisy 1, 2 “Ary ny Fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano” notoriana taminy teto amin’ny Zoara Fanantenana fony izy mbola mpianatra no nampihariny ka nahavitany voka-pikarohana manova ny fiainan’ny daholobe. Manambara ny herin’ny Fanahy Masina izay manome angovo tsy takatry saina io andinin-tsoratra masina io . “Any amin’ny Genesisy 1 and 4 vao nohariana ny masoandro, loharom-panazavana sy hafanana iainantsika . Mbola tsy nisy anefa izany eto izany hoe ny herin’ny Fanahy masina no manome ny angovo ”araka ny fanazavan’i pasitera Rakotobe Rajaomanjato Doda Herisoa . Dia izay fitrandrahana sy ny fifehezana ny angovo izay no fototra niaingan’i Mr Noely ka namoronany ny “thermos” fandrahoana sakafo vita amin’ny akora misy manerana ny nosy sady zakan’ny fahefamividin’ny besinimaro ihany koa.
Amin’ny maha olon’ny finoana an’i Mr Noely dia tsy nazoniny ho azy samirery ilay fahaizamanao fa zarainy maimaimpoana amin’ny olon-drehetra. Voalohany amin’izany ireo tantsaha mpiara miasa sy ireo mpianany ao amin’ny ivotoerana iray any Vohipeno manofana momba ny fambolena sy fiompiana miankina amin’ny fiangonana Loteriana. Nampianariny ny fanamboarana ilay fitaovam-pitsitsiana koa ny Fiangonana Ambohipo ny sabotsy 06 aprily tontolo andro.
Alaina ny gony 1 lehibe voalohany dia zaraina roa manaraka ny lavany .Apetaka amin’ny fisasahan’ny sobika izay efa nasiana sesika sahabo 10 sm ny ilany. Misafidy teboka 2 mifanandrify avy eo hametrahana “fixation”. Rehefa voazaitra sy voafatotra tsara ireo teboka ireo dia ampidirana makao afovoany ny sesika mba ahafahana manjaitra manodidina ilay sobika . Kendrena mba hihenjana tsara ilay gony . Marihina fa avy ao anatiny hatrany no manjaitra .
Rehefa vita ny fanambaniny dia fenoana sesika hatramin’ny vavany ny sisin’ilay gony ary atao mitovy ny fiparitany. Somary tsindrina mba hilentika.Rehefa feno ny manodidina dia velarina ilay gony ary aforitra. Raisina ny sisin’ilay gony dia zairina manodidina amin’izay. Asiana ambiny 2 na 3 sm ametrahana ny sarony. Vita izay ny “thermos”
Alaina ny gony faharoa dia zaraina 2. Aforitra 2 mitovy tsara ny ilany ary apetaka eo ambonin’ilay “thermos”. Henjanina tsara ilay gony ary faritana amin’ny “ stylo” ny faritra manandrify ny vavan’ilay “thermos”. Mamela 2 sm aty ivelany rehefa manjaitra ilay faritra boribory. Asiana ambiny kely hampidirana ny sesika . Rehefa vita izay dia avadika ilay gony ary ampidirina amin’izay ny sesika. Kendrena mba hanana haavo 2 na 3 sm eo ity takotra ity mba ho afaka mitahiry hafanana tsara. Hidiana tanteraka amin’izay avy eo ilay gony.
Hafanaina ny rano ka rehefa mahamay dia arotsaka ny vary. Raha vao mangotra-tokana dia esorina eo ambony fatana ny vilany ary ampidirina ao anatin’ilay thermos avy hatrany. Tsindrina zavatra mavesatra ilay sarony amin’ny voalohany sao tsy mipetraka tsara. Atsasak’adiny(30 minitra) aorian’io dia masaka ny vary ary azo aroso avy hatrany. Azo andrahoana lasopy, hanikotrana koa ity “thermos”. Manatombo fotsiny ny fotoana iketrahana azy eo ambony fatana mialoha ny hampidirana azy anaty “ thermos”. Tena mahomby amin’ny mpanao hotely ity fitaovana ity noho izy mitsitsy arina na kitay. Marihina fa saribao 20 isa monja no nampiasaina tamin’ity fandrahoana vary natao teto amin’ny Zoara fanantenana ity. Novoina avy hatrany ny afo isaky ny mangotraka ny vary. Hamainina ireo arina ireo avy eo ary mbola afaka nandrahoana in’efatra miantoana. Andramo ka izahao raha tsy nanatrika ilay fiofanana ianao.
Tsy misy afatsy tombotsoa no azo amin’ny fampiasana ny “thermos”. Mihena ny arina ilaina , mihena araka izany ny vola lany mbamin’ ny fotoana lany amin’ny fandroan-tsakafo. Tsy resahana intsony ny fanalefahana ny fanimbana ny ala avadika ho arina . .Tena fiovana mihantra amin’ny ativilany, ny poketra sy ny fiainana andavanandro mihitsy e.